Ny vondrona Khronos dia mamorona torolàlana ho an'i Vulkan | Avy amin'ny Linux
Isaac | | GNU / Linux, fandaharana, Tutorials / Manuals / Tips
El Vondrona Khronos dia miezaka mafy hampivelatra, hampiroborobo ary hampanara-penitra ireo API loharano misokatra ho an'ny sary (OpenGL, Vulkan), ho an'ny fandaharana mitovy (OpenCL), ho an'ny zava-misy virtoaly (OpenXR) ary maro hafa (WebGL, OpenVG, OpenVX,…). Tetikasa mahaliana maro hafa no mifototra amin'izy ireo. Eny, izao dia nanao dingana iray hafa izy ireo hampiroboroboana ny API sary Vulkan ary neken'ny tetikasa sy ny mpamorona maro kokoa.
Ny nataon'izy ireo izao dia ny famoronana torolàlana hanombohana an'i Vulkan. Ezaka iraisan'ny mpikambana ao amin'ny vondrona Khronos Group hanome anao ny teboka fanombohana tsara indrindra hanombohana miasa miaraka amin'ity API ity. Famakiana maivana, izay nesorina daholo izay zava-dehibe indrindra ary nesorina izay tsy dia mahaliana loatra. Ity dia hampifandray anao amin'ny loharanom-pahalalana marobe miaraka amin'i Vulkan.
Raha mpamorona ianao ary liana amin'ny famakiana ity torolàlana ity dia azonao atao izany ampidino avy amin'ity rohy ity ihany de Pejy GitHub Avy amin'ity tetikasa ity. Rehefa dinihina fa ny tontolon'ny filalaovana dia manana fanohanana bebe kokoa hatrany hamorona lalao video ho an'ny Linux sy ny fahatongavan'i Google Stadia, dia hetsika stratejika tsara ny manandrana manintona mpamorona maro kokoa sy hanamora ny fomba rehefa te-hamorona lohateny vaovao izy ireo.
Ary raha ny fanazavana, na dia tsy dia misy olana firy aza izany, saingy hatramin'ny noresahiko ny sehatra GitHub, mba hilazana fa misy tarehimarika tena mahagaga ao amin'ity tranonkala ity izay misy ampahany lehibe amin'ireo tetikasa loharano misokatra no karakaraina sy tantanana. Mihodina hoy izy ireo fa misy ny sasany Kaonty mpampiasa 40 tapitrisa tsy Spam izany. Na izany aza, tsy ny rehetra no mpamorona, betsaka ny kaonty izay tsy mandray anjara na mivoatra. Saingy amin'ny tombatombana sasany dia nilaza izy ireo fa manodidina ny 5.000.000 ireo mpandraharaha miasa an-tsitrapo mavitrika ary 7 tapitrisa antsasak'adiny, ary maro no tsy voaloa, miaraka amina totalin'ny 24.2 tapitrisa mpamorona. Niakatra 1M ny tarehimarika nanomboka ny taona 2018 ary antenaina hahatratra 27.7M amin'ny 2023. Maneho hevitra momba izany aho satria manaitra ny halehiben'ny vondrom-piarahamonina izy ireo, ary izany dia ao amin'ny GitHub ihany ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fandaharana » Ny vondrona Khronos dia mamorona torolàlana ho an'i Vulkan
Mahay milaza vazivazy tena tsara i Bill Gates ... tsy mino azy ve ianao?